clusterfuck - ဝစ်ရှင်နရီ
၁.၁ တခြားသုံး ပုံစံများ
၁.၄ See also
၂ ဆင်းသက်လာသော အသုံးများ
clusterfuck (အများကိန်း clusterfucks)
အရာရာတိုင်းက အမှားတွေဖြစ်လို့ ကသောင်းကနင်း အခြေအနေရောက်ခြင်း။မစွမ်းဆောင်နိုင်မှု၊ အဆက်အသွယ်ကျခြင်း၊ (သို့) ရှုပ်ထွေးသော ပတ်ဝန်းကျင်ကြောင့် မကြာခဏဖြစ်ရခြင်း။ (ဗန်းစကား, chiefly military, vulgar) A chaotic situation where everything seems to go wrong. It is often caused by incompetence, communication failure, oracomplex environment.
စစ်ရေးလေ့ကျင့်မှုကို သူဘာထင်ခဲ့သည်ကို မေးမြန်းခဲ့ရာ - သေနာပတိက သောက်ရမ်းဗရုန်းသုန်ကားတွေဖြစ်ကုန် လို့တုန့်ပြန်လိုက်၏။ When asked how he thought the military exercise went, Chief-of-Staff responded, "It'sacluster fuck. ".
အရာရာ စောက်ကျိုးနဲတွေဖြစ်ကို တပ်ထဲမှာ အမည်ရှိတယ် - စုပြုံဖင်ခံပွဲ ။ They hadaname for something like this in the army—a cluster fuck.
အလွယ်တကူ သိမ်းဆည်းရုံလေးဟာ အလုံးစုံကသောင်းကနင်း ဖြစ်သွားသည်။ A simple sweep-and-clear turned intoatotal clusterfuck
နောင်ဆုံးအစဉ်တွင် CIA မှအကြီးအကဲက အလွန်အမင်း ရှုပ်ထွေးအဖြစ်အပျက်များကို အကျဉ်းသုံးသပ်ပုံက - ယေရှုသခင် - မဟာရှုပ်ပွေသလီကြီးပါလား။ In the last sequence the CIA-Superior summarized the highly complex events/mess: "Jesus, whataclusterfuck. ".
clusterfuck (third-person singular simple present clusterfucks, present participle clusterfucking, simple past and past participle clusterfucked)
အလုံးစုံကို ဆုံးရှုံးစေသည်၊ တပြုံလုံးကို ရှုပ်ထွေးစေသည်။ (vulgar) To fuck (something) up, to makeatotal mess of.
ရန်ကုန်စစ်ရုံးမှ စစ်ဆင်ရေးသမားများ ကချင်ပြည်နယ်တွင် ဗိုလ်ချုပ်ဂမ်းတန်အား စစ်ရေးတိုက်ခိုက်ရာ အားလုံးကျဆုံးခဲ့၏။
Military planners of Yangon War Office clusterfucked the whole military operation against Gunhtang Gam Shawng in Kachin State.
car crash (chiefly UK)
trainwreck (chiefly US)
"https://my.wiktionary.org/w/index.php?title=clusterfuck&oldid=775345" မှ ရယူရန်
ဤစာမျက်နှာကို ၇ အောက်တိုဘာ ၂၀၁၇၊ ၀၈:၁၀ အချိန်တွင် နောက်ဆုံး ပြင်ဆင်ခဲ့သည်။